ပရိသတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့ အဆိုတော် Shawn Mendes ရဲ့ Cele Crush က ဘယ်သူများလဲ? | Buzzy
ပရိသတ်တွေသိချင်နေကြတဲ့ အဆိုတော် Shawn Mendes ရဲ့ Cele Crush က ဘယ်သူများလဲ?
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲကောင်လေး Shawn Mendes ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက သူသဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဟပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Q&A with fans ပွဲမှာ သူသဘောကျတဲ့ Celebrity Crush က ဘယ်သူလဲလို့မေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး Shawn Mendes က "ကျွန်တော်အခုထိ Emma Watson ကို ရင်ခုန်သဘောကျနေဆဲပါ"လို့သူ့ပရိသတ်တွေကိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၀ အရွယ်အဆိုတော်ကောင်လေးဟာ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်မင်းသမီးချောလေး Emma Watson ကို Crush လာတာ အတော်လေးကြာပြီဆိုရမှာပါပဲ။Shawn ဟာ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာတုန်းကလည်း Emma Watson ကိုသဘောကျကြောင်းတွစ်တာကနေတစ်ဆင့်ဝန်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုထိလည်းသူ့ရဲ့ အချစ်တွေဟာ Emma Watson အပေါ်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ ပရိသတ်တွေကိုဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Emma Watson ဟာ Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွဲကစလို့လူငယ်ပရိသတ်အများစုရဲ့နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးချောလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့ Emma Watson ဟာ Little Women ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များစွာပါဝင်ထားတဲ့Little Women ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ဆို ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Shawn Mendes ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Camila Cabello နဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးသီဆိုထားတဲ့ Señorita သီချင်းသစ်လေးကို ပရိသတ်ရှေ့ချပြခဲ့ပြီးပါပြီ။နားမထောင်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် Shawn Mendes နဲ့ Camila Cabello တို့ရဲ့ Señorita သီချင်းလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။